Isikhungo sezomthetho esibhekela abesifazane sinezinhloso ezinhle - Bayede News
Isikhungo sezomthetho esibhekela abesifazane sinezinhloso ezinhle
Ingcindezi ku-European Union amalungu elaxaza umgomo i-AstraZeneca
Nakuba iNingizimu Afrika inoMthethosisekelo onconywa umhlaba wonke kodwa iningi labesifazane boHlanga bakuleli alikabuboni ubungcono empilweni yalo yansuku zonke ikakhulukazi ezindaweni zasemaphandleni.
Izinga lodlame olubhekiswe kwabesifazane liphezulu kakhulu. Uma sekuphele ubudlelwano phakathi kwabebe thandana, abesifazane basala bengenalutho futhi behlukumezekile kanti iningi labo alikwazi ukuthola umhlaba nezindawo zokuhlala. Ukukhishwa inyumbazana ezindaweni zokusebenza yinto yemihla ngemihla futhi abesifazane basebenza emikhakheni yomnotho engavikelekile. Abesifazane baphila ngaphansi kwengcuphe yokutheleleka ngengculaza futhi kunzima nokuthi bathole usizo lokwelashwa.
Kuwumthwalo onzima kwabesifazane ukusebenzisa amalungelo abo akuMthethosisekelo wezwe kanti nezindleko zokufaka amacala enkantolo ziphezulu kakhulu okwenza kube nzima kwabesifazane okuyibo abadinga kakhulu ukuvikelwa umthetho.
Isikhungo iWomen’s Legal Centre (WLC) sizama ngakho konke ukukuguqula lokhu ngokuthi sibheke amacala athinta abesifazane nokulwa nemithetho ebandlululayo.
Ngowe-1999 idlanzana labesifazane baseCape Town abangabameli lasungula lesi sikhungo sezomthetho esiyinhlangano engenzi inzuzo esasizobhekana ngqo namalungelo abesifazane. Kusukela lapho iWLC isizakhele igama eNingizimu Afrika nangaphandle ngokulwela amalungelo abesifazane futhi kuningi esikwenziwe okungaba nomthelela omkhulu empilweni yabesifazane.
Izinhloso zeWomen’s Legal Centre
Ihlose ukuzuza izinjongo zayo zesikhathi eside zokulwa ngomthetho nokulwela izinguquko emthethweni. Lesi sikhungo sahlonza izinto ezibalulekile ezinhlanu esasizogxila kuzo:
Ukuthola ngendlela izinsiza: Ngalokhu siyazibophezela ukuthi sizothatha amacala aqinisekisa ukuthi abesifazane bahlomula ngokufanele empahleni uma kuphela ubudlelwano okungaba ngokufa noma ukuhlala ngokwehlukana. Lokhu kufaka ukuqinisekisa ukuthi bonke ubudlelwano buyahlonishwa umthetho kungabhekwe nkolo nesiko.
Ukukhululeka odlameni: Ibuyekeza amacala angenza ngcono ukuba abesifazane nezingane zamantombazane bathole ukuvikelwa uHulumeni odlameni lobulili ikakhulukazi ukudlwengulwa nodlame lwasekhaya nokuqiniswa kokuvikelwa kwezingane zamantombazane ekuhlukunyezweni ezikoleni.
Indawo yokuhlala ephephile: Lesi sikhungo sikwenza umthwalo waso ukuthatha amacala aqhubezela phambili ilungelo lendawo yokuhlala kubantu besifazane nokugwema ukulahlekelwa yileli lungelo uma kuphela ubudlelwano.
Umsebenzi: Sithatha amacala abheka ukuvikeleka kokuqashwa kwengxenye yamalungu omphakathi engavikelekile, ukwenza imithetho ethinta ukuhlukumeza ngokocansi maqondana nezisebenzi ezingavikelekile nokuqinisekisa amathuba alinganayo endaweni yokusebenza.
Ezempilo: Lesi sikhungo sizibophezele ukuqhubeka sivikele izinselelo zomthetho elungelweni lowesifazane lokuziqokela uhlobo lokwelashwa oluhambisana nobulili bakhe, ukulwa ngomthetho ukuqinisekisa ukuthi abesifazane bayaluthola lolu sizo.
Ukuze kuhlonyiswe abesifazane ngolwazi, iWLC ihlinzeka abesifazane ngezeluleko zomthetho mahhala. Abesifazane bayakwazi ukuthi basizwe yiWLC noma badluliselwe esikhungweni esifanele, inhlangano yomphakathi engenzi inzuzo noma inkantolo.
IWLC ithi imibuzo eminingi eyitholayo ihlanganisa ukuhlukana kobudlelwano, udlame lobulili nesondlo.
Isifiso sesikhathi eside salesi sikhungo ukufaka isandla ekukhuleni komkhakha wezomthetho ukuze uzokwazi ukulwela ukulingana kwabesifazane. Umkhankaso waso nomsebenzi wokuqeqesha kugxile ekuhlinzekeni ukweseka ezinye izinhlangano namaqembu abalwela amalungelo abesifazane.
Isiza lezi zinhlangano ngokuzinika imibono yezomthetho, ukwenza izethulo ezizoyiswa ePhalamende, ukusingatha izithangami zokucobelelana ngolwazi nokwakha imithetho nemigomo. Ihlinzeka ngokuqeqesha ukuqinisekisa ukuxhumana nokulandelwa kwemiyalelo yenkantolo nokukhokheleka izindleko.
Ukusebenza ngenhloso yokuguqula umkhakha wezomthetho nomphakathi jikelele, lesi sikhungo sibuye siqeqeshe abameli baseNkantolo Enkulu nokufuna ukwenza izethulo ngezimayelana nezobulili ezithinta amabamba abehluleli ngaphambi kokuba aqokwe. Iphinde iqeqeshe, ihlinzeke ngolwazi nezinsiza emazingeni ezifunda.
nguSabelo Mbatha Mar 19, 2021